Zvese zvaunoda kuti uzive kuverenga kwako kugadzirisa | Ehupfumi Zvemari
Dambudziko revashandi muSpain harina kupera. Hongu, basa rave nani mukati memakore maviri apfuura, zvishoma, asi zvave nani, kunyangwe kushomeka kwemabasa kuchiri kwakanyanya. Chimwe chinhu icho chaunzawo ndechekuti basa rinogadzirwa rakachinjika uye kune yakawanda mukana. Izvo zvakagadzira vazhinji veSpanish nyanzvi muzvinhu zvakawanda, uye kudikanwa kwekuve. Muenzaniso kuziva kuti kugarwa kwacho kunoverengerwa sei.
Kunyangwe isu tisingafanire kufunga kuti makambani anotinyengedza, isu tinofanirwa kuzvitarisira isu nguva dzese, nekuti pane "mhosho" dzinofarira makambani kupfuura isu, vashandi vako, uye isu hatizvione, isu hatizive kana kuverenga kwacho kuri kwechokwadi, uye dzimwe nguva, tinotanga kusaina, tisina kugutsikana nechinhu chero chipi zvacho.
Ziva maitiro ekuverenga kugadzirisa Izvo zvinokutendera iwe kuti uzive zvese izvi uye kudzivirira zvikanganiso zvinogona kukukuvadza iwe, uye, pamusoro pezvose, enda kumberi kwekambani.
Hatitaure izvozvo zvese makambani akaipa uye akaipa panyika, asi zvinogara zvakanaka kuti uzive zvese zvinokanganisa homwe yedu.
Kana pakupera kwechinyorwa iwe uine chero mibvunzo, kana wawana zvikanganiso mukuverenga kwekugara kwako, Isu tinokukurudzira, kutanga kune zvese, kuenda kukambani kunogadzirisa zvingangoitika zvikanganiso, uye kana zvisingaite, enda ku gweta rine hunyanzvi munyaya dzevashandi, mubatanidzwa wako, kana mubatanidzwa waunyoresa.
1 Chii chiri kugadzirisa
2 Iko kuverenga uye siginecha yekugadzirisa kunosungirwa?
3 Chii chinosainwa nemvumo iyi?
4 Chii chinofanira kugadziriswa
5 Maitirwo akaitwa pekugara
Chii chiri kugadzirisa
Kugara kunobva pazwi rechiLatin iro rinoreva 'kupedza'.
Iri igwaro rinoitwa kana hukama hwebasa pakati pemushandi nekambani hwapera, uye mune izvo zvinogamuchirwa izvo zvisungo uye kuzvipira kwevaviri zvakafukidzwa nenzira yakakodzera.
Iri igwaro repamutemo, uye rine zvese zvine hukama nezvehukama hwakafukidzwa, kubva general data, yakabhadharwa zororo, uye zvisingaperi ruzivo izvo isu tichakuudza gare gare.
Ngatitii, mune mamwe mazwi, iyo yekugadziriswa igwaro repamutemo rinoyera kodzero dzemunhu kukambani, nezvose izvi zvinoreva uye zvakamirira kana kwete.
Iyo yekugadzirisa inogona kuzivisa kuti zvese zvisungo zvekambani kune mushandi wavakavharidzirwa, uye kuti bharanzi iri zero, asi zvakare, chii changa chichimirira mamwe mazuva ezororo, kana, zvinopesana, kuti kwasara mazuva maviri pasina chikonzero.
Iko kuverenga uye siginecha yekugadzirisa kunosungirwa?
Izvo hazvidiwe sezvazviri chete chiyero chemamiriro emushandi kwavanotaura, mapato ese, kuti hapana zvikwereti, kana kuti zviripo, zvinotsanangura izvo zvavari uye kuti zvichadzimwa sei.
Kunyangwe na mutemo gwaro rinoitwa kana hukama hwebasa hukapera.
Siginecha yemushandi inofanirwa kunge iripo, asi iine mamwe mamiriro. Kana mushandi akasabvumirana, anogona kusaina nengano "isingateereri". Ndokunge, inogamuchira gwaro, asi kwete huwandu kana pfungwa dzirimo.
Iwe unogona zvakare kuramba, asi izvo zvinoreva kuti kusatambira iyo huwandu hwemari irimo, uye mune zvimwe zviitiko, kurasikirwa nenguva yekugadzirisa iyo yekushaikwa kwebasa, kana iwe uine kodzero nazvo.
Chii chinosainwa nemvumo iyi?
Kusaina pekugara kunongoreva kuti iwe wagamuchira iyo mari yakatarwa ipapo. Izvo hazvireve hazvo kuti zvinoreva, sekukuudza kwatakaita kare, uchigamuchira huwandu uye kuverenga kwavo.
Makambani anowanzoisa chinyorwa mukati umo siginecha inoreva kuti mushandi anotambira, uye kuti hapana zvirevo kana kujekeswa zvinogona kuitwa mushure mezuva rekusaina gwaro. Ichokwadi chekudzivirira zviri pamutemo chinoshandiswa nevazhinji.
Izvo iwe zvaunofanirwa kuita, Isu tinosimbirira, taura kusawirirana kwako, kusaina nekuisa iyo ngano 'Ini ndakagamuchira isingateereri'.
Kana iwe ukasaina kusaina, unofanirwa kuenda kumutongo uye nedzimwe nzira dzinotora nguva. Maitiro uye kudiwa kwaizove pamberi peMediation, Arbitration uye Conciliation Service (SMAC).
Chii chinofanira kugadziriswa
Usati waona kuti kugadziriswa kwacho kunoverengerwa sei, unofanirwa kuve unonzwisisa iyo data rine iro gwaro, uye nezvarinofanira kunge riine, kana paine chero izvo zvisingaonekwe.
Izvo zvinofanirwa kugadziriswa izvi zvinotevera:
Iyo yakajairwa, yakazara data rekambani uye mushandi uyo anobatanidzwa muhukama hwebasa
Mubhadharo wakamirira kubhadhara kusvikira nguva yacho yapihwa
Chikamu chakaringana chemubhadharo unoshamisa (s) unopihwa nemushandi
Chikamu chakaenzana chemubhadharo unobhadhara
Mahoridhe asina kunakirwa nemushandi. Ivo vari 2,5 pamwedzi.
Mari dzisina kubhadharwa, dzinoonekwa muchibvumirano, senge mibairo yekugadzira, kubata nguva, kuwedzerwa nguva, nezvimwe.
Zvikwereti zvese, chero chikonzero
Mari yemubhadharo haifanirwe kuoneka mukugadziriswa, kakawanda inowedzerwa kune iyo yekudzinga tsamba, kana zvakadzama mune yakazara gwaro rechikamu chino.
Uye hazvidi kuti gwaro riine izwi rekuti 'kugara' mumusoro, kubva pakuparara kwemifungo uye pfungwa yechikwereti, tora sezvazviri zvazviri.
Iyo zvakare yakakosha kukumbira dhizaini kana kufambira mberi kwekugadzirisa kuitira kuti iwe ugone kuongorora huwandu uye kujekesa zvese zvisati zvagadziriswa pekupedzisira.
Maitirwo akaitwa pekugara
Hazvina kuoma kuverenga iko kugadzirisa kunoenderana newe, pamwe nekumwe kushanda nemitemo yevatatu iwe uchazviita mune ingangoita gumi maminetsi.
Iwe uchazoda idzi data, nemari yavo chaiyo:
Nguva yekupedzisira mubairo
Mahoridhe ayo iwe ane kodzero, asi hauna kunakidzwa
Iyo yekuwedzera kubhadhara
Tora muenzaniso wemushandi akaiswa basa musi waGunyana 22. Mubhadharo wake waive € 1.000 pamwedzi (iye mushandi ane rombo rakanaka) ane mubhadharo we € 100 parwendo, uye maviri ekuwedzera kubhadhara e € 1000.
Tichafanirwa kuverenga mubairo wezuva nezuva.
Ndokunge, isu tinowedzera iyo € 1.000 pamwe ne € 100 yekufamba uye tovaparadzanisa ne30, iwo mazuva anoumba mwedzi, nekuda kwemitero.
Izvi ndizvo: € 1.100 / 30 mazuva: € 36,66 pazuva.
Kana iwe wakadzingwa musi waGunyana 22, uye muhoro wako wese wakabhadharwa, saka chikwereti chacho chemazuva makumi maviri nemaviri chete
Tinowedzera iyo € 36,66 nemazuva makumi maviri nemaviri.
Chikwereti i € 806,52.
Zvino ngativerengei mazuva ezororo.
Ngatitangei kuverenga mazuva.
Tine kuti kune mazuva maviri nemashanu pamwedzi. Kusvika Nyamavhuvhu, mushandi mumuenzaniso ane mazuva makumi maviri. Kubva zvawakadzingwa munaGunyana, saka une mazuva 1,6 kusvika Nyamavhuvhu 22.
Tinowedzera mazuva makumi maviri nematanhatu nemubhadharo wezuva nezuva, wee € 21,6.
Pazororo, sezvo aisagona kunakidzwa chero zuva, iri € 791.85.
Iye zvino tinofanirwa kuverenga iyo yekuwedzera mubhadharo
Iyo yekuwedzera kubhadhara yakakamurwa kuita maviri nguva, ayo akavharwa muna Ndira 1 naJuly 1.
Sezvo mushandi uyu zvaakashanda kusvika Nyamavhuvhu 22, anekodzero yekuwedzeredzwa mubhadharo wezhizha, unova € 1.000.
Mu semester yechipiri, akashanda mazuva makumi masere nemasere.
Tinowedzera mazuva makumi masere nemasere. Sezvazviri pamesita, iri € 82 pakati pemazuva zana nemakumi masere (hafu yegore), uye ichiwedzeredzwa nemazuva makumi masere nemaviri ayo anotora. Iwo ari € 1.000.
Iye zvino tinoverenga iyo yekugara.
Tinowedzera: Mubhadharo + Zororo + Kubhadharwa kwekuwedzera.
Mune ino kesi: € 806,52 + € 791.85 + € 1.453.03.
Kugara kunofanirwa kuve € 3.051,4.
Kana paine zvakawanda zvakawandisa zviri muchibvumirano, zvinofanirwa kuwedzerwa kune huwandu hwakazara.
Asi, ngatitii iwe unonakidzwa neyako 30 mazuva ekarenda ezororo, uye aingoenderana ne21,6 sezvataona. Ipapo, iyo mari yaizobviswa uye isina kuwedzerwa kune iyo yakazara mari, ichichinja zvachose huwandu hwemari yacho neinosvika € 600 shoma.
Izvo zvinoitika nemari yekuwedzera: Dai mushandi akagashira iyo miviri yekuwedzera kubhadhara pamwedzi wakarongedzwa, paisazove nekuwedzera mubhadharo kuverenga, zororo chete uye muhoro, zvakare kuchinja huwandu kuti huve hwakasiyana zvakanyanya.
Izvo zvakafanana kana iyo yekuwedzera mubhadharo pachinzvimbo chekubhadharwa semi-pagore, inobhadharwa gore rega rega, mari yacho inochinja.
Wongorora zvese izvi, uye wozviisa pachibvumirano.
Isu hatina kutaura nezvako mu Ini ndinoverenga yako yekurega kubhadhara, sezvo izvo zvinowanzoenda mune rimwe gwaro kana mutsamba yako yekudzingwa uye isiri chikamu chekugadzirisa, kazhinji, uye inoverengwa yega kwazviri.
Uye zvakare, kana pakanga paine zvikwereti kubva kumushandi kuenda kukambani, semuenzaniso, mari yekubhadhara, kutenga zvigadzirwa zvavo, semuenzaniso, mudziyo, ivo vanobviswa kubva pane yakaunganidzwa yakazara.
Dzimwe nguva mhedzisiro yacho haina kunaka kune mushandi, uye dzimwe nguva, zvinoguma nemazero, zvese zvinogoneka mukuverenga kwakadai.
Iyo yekugadzirisa ibhalansi yezvisungo zvekambani nemushandi uye zvinopesana, kusvikira nguva iyo hukama hwebasa hwapera. Zvinosanganisira kumirira mubhadharo wakamirira wakaunganidzwa nechibvumirano, izvo zvinogona kunge zvichitsigira mushandi kana kambani.
Enda kune nyanzvi gweta, uye usayine zvinoenderana nezvamunowana, pasina kumanikidzwa nekambani, uye gara uine ngano 'isingateerere' kana paine chinhu chinoshamisa mukugadziriswa.
Verenga wega kugadzirisa kwakoSezvauri kuona, zviri nyore kwazvo, uye pamusoro pezvose, nekukurumidza, paInternet pane akawanda mafomu uye mafomu anozviverenga otomatiki, kana iwe usingavimbi kuverenga kwako.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » General hupfumi » Basa » Maitiro ekuverenga yako kugadzirisa
Makadhi kubva kuzvitoro zvemadhipatimendi kuti atenge zvakachipa